Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii Jaaliyadda Yemen oo magaalada Sanca lagu soo gabagabeeyay
Shirweynihii Jaaliyadda Yemen oo magaalada Sanca lagu soo gabagabeeyay
Posted by ONA Admin	/ March 22, 2013
Jaaliyadda S. Ogadenia ee dalka Yemen – Sana’a Ayaa waxay isugu timid shir balaadhan, oo Abaabul iyo wada tashi ah. Shirkaas ayaa waxaa kasoo qaybgalay, bulshada qayba -heeda kala duwan, sida ururka dhalinyarada, hooyooyinka, aqoonyahanka, Odayaasha , iyo dhamaanba qaybaha bulshada.
Shirkaa ayaa ugu horaynba waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay Sh/Ahmed Haadi (badawi) oo soo jeediyay wacdi diini ah aadna u qiiro- galiyey dadkii dhagaysanayey oo ku saabsanaa xaqnimda halganka S.Ogadenia ee ay J.W.X.O. hormuudka u tahay. Kadib waxaa khadka telphoneka, sitoosa loogu soo dhawayay, G/kuxigeenka HAAB , N/hure .Halgame A/qaadir Gamaadiid oo run ahaantii ay aad ugu jeelanaayen hadalkiisa xubnihii shirka fadhiyay, wuxuuna siiyay ka qaybgala yaashii shirka warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysay, iyo xaalada guud ee uu halganku maanta marayo iyo sida ay xukumadii dhiigyacabka ahayd ee shacabkeena ku dulnoolayd aynan maanta laba ishaysta u lahayn iyo shir ku sheega hada uga socda Bhar’daar, oo ah Caasimada qawmiyadda Axmaarada.
Waxay xubnaha jaaliyadda si fiican uga doodeen ajendihii shirka iyadoo lagu balamay in lasii labanlaabo taageeradii halganka shacabka S.Ogadenya lana ilaaliyo midnimada iyo wadajirka jaaliyadda.
Waxaa kaloo lagu soo bandhigay goobta heeso wadani ah iyo cayaarihii hidaha iyo dhaqanka aynu u lahayn. Guntii iyo gabgabdii waxaa shirka soo xidhay Gudoomiyaha jaaliyada wuxuuna shirku ku soo xidhmay jawi Aad iyo Aad u wanaagsan.